ပြည်သူ့လွှတ်တော် - Pyithu Hluttaw | pyithuhluttaw.gov.mm contacts
ပညသ့လတတ - Pyithu Hluttaw
ဒဂ မြ့ သစ (ဆ ပ ကမ ). ဒဂ မြ့ သစ (အ ရ့ ပ င ). ဒဂ မြ့ သစ ( တ င ပ င ). ဒဂ မြ့ သစ ( မ က ပ င ). ပ ဏ္ဏ ကျန. မင လ (ပ ခ တ င ). သဃ န ကျန. အင ဂ န ယန. မ လမြ င ကျ န. ပည ကြ တ ခ န. ကြည မင တ င. ကြ အင ဆ ပ ကြ. ကြ့ ပင က က. မ လမြ င ကျန. ကရင ပည သ့ ပ တ. စည လ ည ည တ ရ င ဒ မ က ရစ ပ တ (ကခ င ပည နယ -စဒက). တအ င (ပ လ င )အမ သ ပ တ. တ င ရင သ စည လ ည ည တ ရ ပ တ. ဓ တ င ရင သ လ မ မ ဒ မ က ရစ ပ တ. ပအ ဝ အမ သ အဖ့ ခ ပ. ဖလ -စ ဝ်ါဒ မ ကရက တစ ပ တ. မ န ဒသလ ဆ င ရ ဒ မ က ရစ ပ တ. ရခ င တ င ရင သ မ တ တက ရ ပ တ. ရ မ တ င ရင သ မ ဒ မ ကရက တစ ပ တ. ဝ ဒ မ ကရက တစ ပ တ.
OVERVIEW OF pyithuhluttaw.gov.mm
TRAFFIC RANK FOR PYITHUHLUTTAW.GOV.MM
Hey there! Start your review of pyithuhluttaw.gov.mm
CONTACTS AT PYITHUHLUTTAW.GOV.MM
11 ထ လင
12 ဒက္ခ ဏသ ရ
13 ဒ က ဥ
14 ဒ ပ ယင
15 ဒ မ ဆ
16 နတ တလင
17 နတ မ က
18 နန ယ န
19 နမ ခမ
20 နမ စန
ဒဂ မြ့ သစ ဆ ပ ကမ . ဒဂ မြ့ သစ အ ရ့ ပ င . ဒဂ မြ့ သစ တ င ပ င . ဒဂ မြ့ သစ မ က ပ င . ပ ဏ္ဏ ကျန. မင လ ပ ခ တ င . သဃ န ကျန. အင ဂ န ယန. မ လမြ င ကျ န. ပည ကြ တ ခ န. ကြည မင တ င. ကြ အင ဆ ပ ကြ. ကြ့ ပင က က. မ လမြ င ကျန. ကရင ပည သ့ ပ တ. စည လ ည ည တ ရ င ဒ မ က ရစ ပ တ ကခ င ပည နယ -စဒက. တအ င ပ လ င အမ သ ပ တ. တ င ရင သ စည လ ည ည တ ရ ပ တ. ဓ တ င ရင သ လ မ မ ဒ မ က ရစ ပ တ. ပအ ဝ အမ သ အဖ့ ခ ပ. ဖလ -စ ဝ်ါဒ မ ကရက တစ ပ တ. မ န ဒသလ ဆ င ရ ဒ မ က ရစ ပ တ. ရခ င တ င ရင သ မ တ တက ရ ပ တ. ရ မ တ င ရင သ မ ဒ မ ကရက တစ ပ တ. ဝ ဒ မ ကရက တစ ပ တ.
တန့ ယန, တပ က န, တ က ကြ, တ တ န, တ တ ဦ, တ န ဇ, ထန တလန, ထန တပင, ထ ဝယ, ထ ခ င, ထ လင, ဒက္ခ ဏသ ရ, ဒ က ဥ, ဒ ပ ယင, ဒ မ ဆ, နတ တလင, နတ မ က, နန ယ န, နမ ခမ, နမ စန, နမ ဆန, နမ္မတ, ပခ က, ပင လည ဘ, ပင လ င, ပင တယ, ပန တ န, ပန ဘ တန, ပန တ င, ပလက ဝ, ပ ဗ္ဗသ ရ, ပ သ မ, ပ တ အ, ပ ဥ မန, ပ င ဖ, ဖယ ခ, ဖ ပ န, ဖ ဆ င, ဖ ကန့ 
လက်ခံတွေ့ဆုံမှုများ | ပြည်သူ့လွှတ်တော် - Pyithu Hluttaw
ပည ထ င စ သမ္မတ မန မ င င ပည သ့ လ တ တ ဥက ဋ္ဌ ဦ ဝင မင က ရ ယ သမ္မတ င င သမ္မတ H.E. Park Geun-hye င တ့ ဆ. ပည သ့ လ တ တ ပည ရ မ င တင မ က မတ ဥက ဋ္ဌ Institute of International Education (IIE) အဖ့ အ လက ခ တ့ ဆ ဆ. ပည ထ င စ လ တ တ ဥပ ဒ ရ ရ င အထ က စ္စရပ မ လ လ ဆန စစ သ သပ ရ က မရ င ဥက ဋ္ဌ သ ရဦ ရ မန IDLO ည န ကြ ရ မ ခ ပ င UNDP ဌ နက ယ စ လ ယ တ့ အ သ ခ စ လက ခ တ့ ဆ. တ့ ဆ ပ သ့  ပည ထ င စ လ တ တ ဥပ ဒ ရ ရ င အထ က စ္စရပ မ လ လ ဆန စစ သ သပ ရ က မရ င ဥက ဋ္ဌ န င အတ က မရ င အဖ့ ဝင မ င တ ဝန ရ သ မ တက ရ က ကြသည. ပည သ့ လ တ တ ဥက ဋ္ဌ ဥ ဝင မင သည ပည ထ င စ သမ္မတ မန မ င င...
ပည သ့ လ တ တ ဥက ဋ္ဌ သ ရဥ ရ မန မ က တ င င ပ ခ တ င ဒသကြ မြ့ နယ မ ရ ပည သ မ င တ့ ဆ ခင မ တ တမ ဓ တ ပ မ. ပည သ့ လ တ တ ဥက ဋ္ဌ သ ရဥ ရ မန စစ က င တ င ဒသကြ ခရ စဥ မ တ တမ ဓ တ ပ မ. ပည ထ င စ လ တ တ န ယက သ ရဥ ရ မန ပ ဥ မန င လယ ၀ မြ့ နယ မ မ ဒသခ ပည သ မ င တ့ ဆ ခင. ပည သ့ လ တ တ ဥက ဋ္ဌ က က ကြ မြ့ နယ င ဖ မြ့ နယ တ့  ဒသခ ပည သ မ အ တ့ ဆ ခင. ပည သ့ လ တ တ ဥက ဋ္ဌ က က တ ခ င ည င လ ပင မြ့ နယ တ့ မ ဒသခ ပည သ မ အ တ့ ဆ အမ စက ပ ကြ စဥ. ပည ထ င စ လ တ တ န ယက သ ရဥ ရ မန အ မရ ကန င င ခ စ ကြည ရ ခရ စဥ မ တ တမ ဓ တ ပ မ. က မတ / က မရ င မ. 2012 Pyithu Hluttaw ပည သ့ လ တ တ.
Carpkyaw-Gratis Monastery Educational Institution: 2015-10-11
ကပ်ကျော်၊ ပညာပါရမီကုသိုလ်ပြုအဖွဲ့. အခုထက် ပိုတော်ချင်သလား၊ ဒီ ၇ ချက်ကို လုပ်ကြည့်ပါ. အခုထက် ပိုတော်ချင်သလား၊ ဒီ ၇ ချက်ကို လုပ်ကြည့်ပါ. Written by စုပြည့်စုံ. ၁) ဂီတတူရိယာတစ်ခုကို တီးပါ. ၂) ဘယ်စာတွေ့တွေ့ ဖတ်ပါ. ၃) ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ. ၄) ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကို လေ့လာပါ. ၅) တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာကို စစ်ဆေးပါ. ၆) ဦးနှောက်ကို အလုပ်ပေးပါ. ၇) တရားထိုင်ပါ. Credit: စုပြည့်စုံ. ကပ်ကျော်၊ ပညာပါရမီကုသိုလ်ပြုအဖွဲ့. Category: မြန်မာ့ပညာရေးသတင်း. Published on Tuesday, 13 October 2015 06:09. ဆက်ဖတ်ရန်. ရန်က&#414...
ဝကျဘျဆိုဒျမြား | MONREC
အပ ပ င ဒ သစ မ လန စ ပ ည ရ ဦ စ ဌ န. ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ ဦ စ ဌ န. မ န မ သစ လ ပ ငန. ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ န င သစ တ ရ ရ ဝန က ဌ န. ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ န င သစ တ ရ ရ ဝန က ဌ န. ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ န င သစ တ ရ ရ ဝန က ဌ န (သစ တ ဦ စ ဌ န). ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ န င သစ တ ရ ရ ဝန က ဌ န (အပ ပ င ဒ သစ မ လန စ ပ ည ရ ဦ စ ဌ န). ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ န င သစ တ ရ ရ ဝန က ဌ န (ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ ဦ စ ဌ န). ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ န င သစ တ ရ ရ ဝန က ဌ န (မ တ င ဦ စ ဌ န). ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ န င သစ တ ရ ရ ဝန က ဌ န (မ န မ သစ လ ပ ငန ). ဆက စပ အဖ အစည မ.
Pyithu Hluttaw - Law Database
င င တ ငြ မ ဝပ ပ ပ မ တည ဆ က ရ အဖ့ .